Akụkọ na-enweghị atụ banyere Mgbanwe Maltese "Ọbara na Okpueze" na-agba ugbu a
Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Na -agbasa Akụkọ Mba Nile » Akụkọ na -agbasa ozi Malta » Akụkọ na-enweghị atụ banyere Mgbanwe Maltese "Ọbara na Okpueze" na-agba ugbu a
omenala • Akụkọ na -agbasa ozi Malta • News • Iwughachi • Tourism • Mmelite nke Njem njem • Ihe nzuzo Njem • trending Ugbu a • Akụkọ dị iche iche
Mmepụta ihe nkiri Maltese, "Ọbara na okpueze" (nke a na-akpọbu "Just Noise,") nke Harvey Keitel ("Dogs Reservoir," "Pulp Fiction") na Malcolm McDowell ("Oroma Clockwork," "Mozart In The Jungle"). ugbu a na-asọba na Amazon Prime, iTunes, Hoopla, InDemand, AT&T, DirecTV na Google Play.
Ọbara na okpueze ahụ gosipụtara akụkọ nzuzo nke otu ụmụ amaala Malta si lụọ ọgụ maka nnwere onwe ha megide England na 1919.
A tara ihe karịrị ụmụ amaala Malta ruru 115, ọkachasị ndị na-eto eto, maka ime ihe ike ma maa ha ikpe na nga.
Ihe nkiri a bụ mmeri Malta nọworo na-eche ogologo oge iji soro ụwa kerịta otu obere agwaetiti Mediterenian si were Alaeze Ukwu Britain.
Ezi akụkọ banyere nkwụsi ike na nsọpụrụ nke kpuchiela ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ afọ 100, nke ndị Council Council nke Malta na-akwado nke ukwuu, bụ nke sitere na Los Angeles nke Electronic Entertainment kesara.
Dabere na ihe ndị mere eme, “Ọbara Na okpueze”Gosipụtara akụkọ zoro ezo nke otu ụmụ amaala Malta si lụọ ọgụ maka nnwere onwe ha megide England na 1919. Ozugbo agbasoro Agha Worldwa nke Mbụ, na arịrịọ maka nnwere onwe nke obodo ha, ndị Malta si na ụdị ndụ niile dị iche iche, jikọrọ aka wee duga ọgba aghara megide ndị Britain. E zigara ndị agha ka ha kwụsị ọgba aghara. Ọbara gbara mgbe ndị agha Britain gburu ndị na-eme ngagharị iwe na-ejighị obi ọjọọ. N'ihi mkpuchi ya nke gọọmentị Britain kpuchiri n'afọ ndị sochirinụ, edeghị mgbanwe ahụ ma ọ bụghị ebe niile amaara ya. Ọnụ ọgụgụ dị ukwuu nke ndị nwụrụnụ bụ ihe ihere nye ndị agha Britain. A tara ihe karịrị ụmụ amaala Malta ruru 115, ọkachasị ndị na-eto eto, maka ime ihe ike ma maa ha ikpe na nga. “Ọbara Na okpueze”Bụ mmeri mmeri nke Malta ogologo oge iji soro ụwa kerịta otu obere agwaetiti Mediterenian si were Alaeze Ukwu Britain.
"Ọbara Na okpueze”Bụ Jean-Pierre Magro (nke“ Bulgarian Rhapsody ”) mepụtara ma dee ya, nke Pedja Miletic mepụtara, Aaron Briffa nke Davide Ferrario duziri (“ Mgbe etiti abalị gasịrị, ”“ Anyị niile ga-ada ”). Mario A. Azzopardi, Roland Joffe, Konstantin Ishkhanov, Albert Marshall, Shayne Putzlocher na-eje ozi dị ka ndị isi na-emepụta ihe. Egwú bụ Alexey Shor dere.
Onye na-emepụta ihe bụ Aaron Briffa kwuru, sị, “Anyị nwere nnukwu mpako ịkọ otu obere agwaetiti siri bilie iji merie alaeze kachasị ike n'ụwa. Akuko David na Goliath akwuola otutu rue ugbua. ”
Mgbe ajụrụ screenwriter Jean Pierre Magro ebe ebe esi nweta ihe Malta, o kwuru na “ụlọ ọrụ ndị ọchịchị Colonial nke Britain gbalịrị ikpuchi egwu ha ma kpochapụ ihe ngosi foto ọ bụla, ekwenyere m na naanị foto 3 ma ọ bụ 4 dị ndụ. Otú ọ dị, e nwere akụkọ abụọ ndị mere dị ka ebe e si nweta ha na akwụkwọ dịgasị iche iche nke ndị ọkọ akụkọ ihe mere eme Malta dere kemgbe ọtụtụ afọ. ”
N'ikwu okwu ọzọ, onye na-emepụta Pedja Miletic kwuru na "ọ masịrị ya nke ukwuu na ọtụtụ ndị na-eme ihe nkiri nabatara ọrụ a nke bara oke uru na inyere fim ahụ aka ịbụ eziokwu." Ọ gbakwụnyere na onye nduzi, Davide Ferrario, ji akụkọ mara mma kọwaa akụkọ ahụ. Miletic kwukwara na “egwu Alexei Shor mara mma iji gosipụta ọnọdụ zuru oke.”
Agwaetiti ndị anwụ na-acha na Malta, n'etiti Oké Osimiri Mediterenian, bụ ebe obibi maka ịchebe kachasị dị egwu nke ihe nketa na-emebibeghị, gụnyere nke kachasị elu nke UNESCO World Heritage Sites na mba ọ bụla-steeti ebe ọ bụla. Valletta nke ndị Knights St St. ahụ dị mpako wuru bụ otu n'ime nlegharị anya UNESCO na European Capital nke Omenala maka afọ 2018. Ebumnuche Malta na okwute sitere na okwute ụlọ kacha ochie na-akwụghị ụgwọ ọ bụla na ụwa, ruo na otu nke Alaeze Ukwu Britain kachasị egwu. usoro nchebe, ma gunyere ngwakọta nke ụlọ, okpukpe na owuwu ndị agha site n'oge ochie, ochie na oge oge a. Site na ihu igwe na-achasi ike, osimiri mara mma, ndụ abalị na-eme nke ọma na afọ 7,000 nke akụkọ na-atọ ụtọ, enwere nnukwu ọrụ ịhụ na ime. Maka ozi ndị ọzọ na Malta, gaa na www.visitmalta.com.
Banyere Arts Council of Malta
A na-akpọbu Malta Council for Culture and the Arts (MCCA), Arts Council Malta (ACM) bụ ụlọ ọrụ mba maka mmepe na itinye ego na ngalaba ọdịbendị na nke okike. Isi ọrụ ya bụ itinye ego, na-akwado ma na-akwalite mpaghara ọdịbendị na okike na Malta. Kansụl na-ejikwa ego ntinye ego maka ngalaba ọdịbendị na nke okike site na mmemme mmemme mba ya. www.artscouncilmalta.org/pages/the-council/about-us/our-profile
Banyere ntụrụndụ eletriki
Egwuregwu Electric bụ mmepụta sitere na Los Angeles, nkesa mba ụwa, na ụlọ ọrụ na-emepụta post, yana ọfịs na Vancouver, Canada.
Electric si anụ ụlọ na-ekesa nkewa Theatric tọhapụrụ ndị inwe-emeri film “Kpọọ Aha m” starring Lisa Brenner na Nick Blood, “Bad Samaritan” starring David Tennant and Robert Sheehan, and Rob Reiner’s biopic “LBJ.” Companylọ ọrụ ahụ nyere ikikere ikike ikike ihe nkiri vidio ndị a na Amazon na ụlọ ọrụ ndị ọzọ.
Igwe ọkụ eletrik a kụrụ n'egwuregwu elektrọnik, "The Librarians" na "Leverage," bụ nke gbara ọsọ maka oge anọ na ise n'otu n'otu na TNT, na-aga n'ihu na-enyefe ọfụma na mpaghara niile nke ụlọ na nke mba. Ugbu a eletriki bụ na mmepụta agbapụ ndị atụ ogho-n'ihu nke “leverage,” “leverage: Mgbapụta,” nke bụ otu n’ime ndị mbụ mbụ mmemme na-abịa site Amazon si IMDb TV. Egwuregwu eletriki usoro "The outpost" bụ nke a na-arụ n'oge nke anọ ya maka CW na "Almost Paradise" na-aga ugbu a na IMDb TV mgbe ọ gbasịrị na WGN America. Egwuregwu International Distribution Division Electric na-ejikwa ụfọdụ ikike nkesa maka ụlọ akwụkwọ ihe nkiri FilmRise tinyere aha ndị dị ka “Mgbanwe Dị Na Uche"Nke Rachel Brosnahan nke" Onye Nwanyị Na-atụ Anya Maisel. "
Ozi ndị ọzọ banyere Malta